Sidee loo qoraa? - Etourism
Wakaaladda Dalxiiska ee Kuuriya
Waxyaabaha la sameeyo
Hal Maalin Dalxiis
Dalxiis Maalin Badan (2 ~ 5 Maalmood)
Dalxiis Maalin Badan (6 ~ 13 Maalmood)
Turjumaadda Khaaska ah
Adeegga DMC & PCO
Macaamiisha & Mashruuca
Adeegga wadayaasha Kuuriyada Kuuriya
Hoteelka + Gaadiidka Diyaaradaha
Sidee loo qoraa?
Hal maalin oo Xirmooyinka Xirmooyinka
Xirmooyinka Xirmooyinka Maalintii badan
Xullo taariikhda Bilaabashada, xulashooyinka (haddii ay jiraan) iyo tirada dadka. Guji DAR gaadhigii or BOOK NOW.
Riix DIYAARIYO LOOGU TALAGALAY.
*calaamad iyo Macluumaadka Attendee waa in la buuxiyaa.
Riix Ku sii soco PayPal. * Waxaa jira 5% lacagta komishanka lacag bixinta.
Ka hubi emaylkaaga foojarka.
U adeegso foojarkaaga foojarka taariikhda loo qoondeeyay.
Naxdin nooga dhaaf faalooyinka.
Xullo Taariikh Bixitaan, Pax iyo tirada dadka.
EX) Haddii laba qof u baahan yihiin boos celin, guji taariikhda bixitaankaaga oo guji 'Wixii loogu talagalay dadka 2' ee xulashada PAX. Ka dib guji '2' ee xulashada qofkiiba.
Riix DAR gaadhigii or BOOK NOW.
- Waxaan kuu soo diri doonaa Nuqulka Xaqiijinta Qabyo-qoraalka gudaheeda maalmaha shaqada ee 3.
- Waxaan kuu soo diri doonaa Fure Xaqiijinta Kama-dambaysta ah ee 2 toddobaad kahor taariikhda bixitaanka.
Xullo Taariikh Bilaabid, Hotel Grade, Pax iyo tirada dadka.
Ex) Haddii laba qof u baahan yihiin boos celin, guji taariikhda bixitaankaaga oo dhagsii ikhtiyaarkaaga ee Fasalka Hoteelka. Ka dib guji 'Wixii loogu talagalay dadka 2' ee xulashada PAX. Ugu dambeyntii, guji '2' ee xulashada qofkiiba.
Dooro ikhtiyaarka lacag bixinta: ku shub PayPal oo isu dheelitir kaash marka aad timaadid Korea ama lacag bixin buuxda iyadoo loo marayo PayPal.
Guji Ku Sii soco PayPal. * Waxaa jira 5% lacagta komishanka lacag bixinta.
- Waxaan kuu soo diri doonaa Nuqulka Xaqiijinta Qabyo-qoraalka gudaheeda maalmaha shaqada ee 3
Dooro taariikhda keenista iyo tirada sheyga. Guji DAR gaadhigii or BOOK NOW.
* Taariikhda Imaatinka: Waxaa lagugula talinayaa inaad gujiso taarikhda taariikhda la soo galo hudheelkaaga.
* Waa khasab in la buuxiyo:
calaamad iyo Macluumaadka ka soo qeyb galayaasha
Accommodation cinwaanka / Hoyga lambarka taleefanka
Hotel muddada at dalbo Qoraallada. (Haddaad jeceshahay inaad ka hesho sheygaaga meel aan ahayn hudheelkaaga, fadlan qor cinwaanka iyo lambarka taleefanka ee booskaaga loo qoondeeyey Qoraallada Dalbada)
Riix PayPal . Riix Ku sii soco PayPal. * Waxaa jira 5% lacagta komishanka lacag bixinta.
* Si aad u aragto nidaamka PayPal, fadlan eeg 'PayPal'.
Ka hubi emaylkaaga risiidhada bixinta.
Wax soo saarkaagu wuxuu kugu sugi doonaa miiska hoteelka hortiisa ama qolka hoteelkaaga.
Fadlan hubi dalabkaaga kahor intaadan sii iibsan.
Haddii aad hore u leedahay koonto Paypal, fadlan sii wad iibsashada.
Haddii tani ay tahay markii kuugu horreysay ee aad isticmaaleysid PayPal, oo aadan dooneynin inaad sameysato koonto PayPal, fadlan hoos ka raac.
1. Guji Ku Bixi Debit ama Kaarka Deynta.
2. Guji Dalkaaga.
3. Buuxi faahfaahinta Kaarkaaga iyo cinwaanka Biilasha.
4. Dhagsii Oggolow (Sanduuqa Sax) & Bixi Hadda.
Waxaa jira 5% lacagta komishanka mushaharka.
Ka hubso emaylkaaga bixinta rasiidka iyo foojarka.
(Waxaan kuu soo diri doonnaa foojarka gudaha maalinta ganacsiga ee 1 maalmeedka waxyaabaha la sameeyo iyo gudaha maalmo 2 ganacsi oo loogu talagalay Socdaalka Xirmooyinka)
Madaxweynaha: Lee Hee
Diiwaan. Lambarka: 105-87-73167
Telefoon: + 82-2-323-6850
Cinwaanka: 2001, 5, Gasan digital 1-ro, 2001, Geumcheon-gu, Seoul
Bogagga Internetka ee Etourism Blog
Shuruudaha iyo qodobada
Xuquuqda daabacaadda © 2018-2020 Etourism. Xuquuqda oo dhan waa la keydiyay ⠀⠀ / ⠀⠀ Sawirada waxaa soo saaray KTO (Korea Dalxiis Korea).